Wasiiro reer Somaliland oo ka qeyliyay qorshe ay waddo dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiiro reer Somaliland oo ka qeyliyay qorshe ay waddo dowladda Soomaaliya
30th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Hargeysa – Mareeg.com: Wasiirada duulista hawada iyo Boostada iyo Isgaarsiinta Somaliland ayaa labaduba ka qeyliyey qorsheyaal ay waddoo dowladda Fderaalka ah ee Soomaaliya.
War kasoo baxay Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in codsiga ay gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in maamulka hawada lagu soo wareejiyo uu dhaawacayo heshiiskii Turkiga, sida warka loo dhigay.
Wasiirka wasaaradda duulista hawada ee maamulkaasi Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa Dowlada Somalia ku eedeeyay inay ka baxday balamihii lawada gaaray, waxa uuna sheegay in marnaba aysan suuragal aheyn in Hawada Somaliland laga maamulo Magaalada Muqdisho.
Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi oo arrinta hawada ka hadlaayay ayaa Tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si ula kac ah uga baxday heshiisyo dhowr ah oo ay la gashay maamulka Somaliland, waxa uuna arintaasi ku tilmaamay mid u muuqaneyso Siyaasad lagu maja-xaabinaayo Maamulkiisa.
“Waxaan halkan ka cadeynayaa in dowladda Soomaaliya ay baal martay qodobkii ugu muhiimsanaa ee heshiiskii dhex maray labada dhinac oo ahaa in magaalada Hargeysa laga dhigo xarunta laga maamulayo hawada” ayuu yiri Maxamuud Xaashi Cabdi.
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku soo afjaray in heshiiskii ay gaareen Somaliland iyo Soomaaliya uu dhigayay in sanadka 2015 lagu celiyo gacmaha Soomaaliya xarunta laga maamulo hawada.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan si rasmi ah u codsatay in lagu soo wareejiyo maamulka hawada, iyadoo sanadkii hore dowladda iyo maamulka Somaliland ku hesheeyeen in si wadajir ah loo maamulo hawada, islamarkaana kooxda maamuleysa saldhiga looga dhigo Hargeysa.
Dhanka kale, Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta maamulka la magacbaxay Somaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa beeniyey iney magaalada Hargeysa ku sugan yihiin wakiilo u shaqeeya wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay magalada Hargeysa ayaa wax aan jirin ku tilmaamay arrintaas oo la sheegay wax ka jira, isaga oo sida oo kalena carabka ku dhuftay in aan xataa loo ogalayn shacbiga reer Somaliland in ay xafiisyo noocan oo kale ah ay furtaan.
“Waxaan doonayaa in aan eray kaliya aan halkan ka Iftiimiyo oo aan jawaab kaliya uga dhigo erayo ka soo baxa masuul ka tirsan dawlada Xamar isaga oo marka halkaas ku xusaayey in Boosta Soomaaliya ay Hargeysa oo ah caasimada Somaliland ay ku leeyihiin dad wakiil uga ah oo magacii Soomaaliya ku shaqaynaaya ay halkan Hargeysa Jooga, waxaanan doonayaa in aan halkaas ka Iftiimiyo in warka noocas ahaa aanu halkaas ka jirin, Somaliland ma jiro qof Soomaaliya leedahay oo halkan cid wakiil uga ah” ayuu yiri wasiirka boostada Somaliland Maxamed Jaamac.
Alshabaab oo sheegtay dilka 3 askari oo lagu toogtay Muqdisho
Daacish oo sheegatay iney dowlad u tahay dhamaan Muslimiinta